वडाअध्यक्षमा कुनै पार्टी व्यक्ती विषेश नभई मेरो अनुभवका कारण मेरो उम्मेदवारी – Saurahaonline.com
वडाअध्यक्षमा कुनै पार्टी व्यक्ती विषेश नभई मेरो अनुभवका कारण मेरो उम्मेदवारी
रत्नगर नगरपालिका वडा नं १२ स्थित सालघारी चोकका श्याम प्रसाद बराल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडा नं १२ को वडाअध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । उहाँ बिस २०४३ सर्वहारा श्रमिक संगठनको सदस्यता लिएर औषचारिक राजनैतिक यात्रा सुरु गर्नु भएको थियो । पछि रत्ननगर साविक ९नम्बरमा ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्ष बनेर वडा बिकासमा महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्भाह गर्नु भएको थियो । अहिले खानेपानी रत्ननगरको उपाध्यक्ष, श्री कृष्ण प्रणाली मन्दीरका उपाध्यक्ष , सामुदायिक सेवा केन्द्र रत्ननगरको सचिव र विभिन्न संघसंस्थामा रहेर सामाजिक कार्यमा जुट्र्दै आएका बराल सँग आसन्न स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा बिकास पौडलले गर्नु भएको संक्षिप्त कुराकानी–
मेरो उम्मेदवारी रत्ननगर १२ लाई विकासका दृष्टिले एउटा नमुना वडामा चिनाउन आफुलाई योग्य जस्तो लागेको छ । कुनै पार्टी व्यक्ती विषेश नभई मेरो अनुभवका कारण मेरो उम्मेदवार हो ।
तपाईं मतदाताबीच कति लोकप्रिय हुनुहुन्छ ?
आफुलाई ४ वटा यहि क्षेत्रमा भएको विभिन्न निर्वाचनको परिमाण र कामका सघाएको हिसावले प्रिय नै छु जस्तो लाग्छ । मतदाताले तपाईंलाई नै किन भोट दिने रु प्रस्ट भन्दा मैले हाल गर्ने कामका र व्यक्तिगत चर्चा भन्दा पिनि मैले यस अघि सम्हालेका संघ संस्थाको प्रगति र उन्नतीलाई आधार मान्दै वडाका भौतिक विकाश निर्माण तथा शिक्षा, वातावरण आदी क्षेत्रमा वडालाई नुमुना वनाउनका लागि मैले मत मागेको छु ।
अन्य पार्टीका प्रतिस्पर्धी पनि होलान्, के कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ, चुनाव जित्ने आधार नि ?
मैले अगाडी भनिसके मैले प्रतिकुल हेरेर रणनिती वनाउन जरुरी छैन । मैले त वडाका समस्यालाई हेरेर काम गर्ने वाचा गर्नुर मेरो लगनशिलता र दृढता र आम मतदाता विच भएको परिचय नै मेरो चुनाव जित्ने आधार हो ।
वडा विकासका योजना के के छन् ?
भत्किएको बाटो वनाउने , सुकुम्वासी वस्ती लाई दिगो व्यवस्थापन गर्नु , ढल निर्माण गर्नु । विधालयलाई आत्मनिर्भर र राम्रो पढ्न पाठनमा सहयोग गर्नु , महिलाहरूको लागि सिपमुलक तालिमहरू संञ्चालन गरि आत्मनिर्भर बनाउनु । । कृषिमा आधुनि प्रविधि भित्रयाएर व्यवसायीक कृषिको बिकास गर्नु , निर्माण भएको बाल पार्क व्यवस्थित र पुर्ण बनाउने । समान हक र समावेशीलाई जोड दिनु , वडामा रहेका मठ मन्दिर , चर्च , गुमगुम्बा को संरक्षण र प्रद्धन गर्ने मेरो योजना रहेका छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीहरुबीच कडा सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईंले चुनाव जित्ने आधार के देख्नुभएको छ र ?
मेरो स्थानीय कामको योजना , मेरो क्षमता दृढता अनुभव तथा राष्ट्रिय रुपले सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले देशमा लोडसेडिङ्गको अन्तय हुनु देशमा धेरै बर्षमा आर्थिक बृद्धि दर उच्च हुनु । मुल्यवृद्धि दर न्युन हुनु । समाजसेवी चरित्र लाइ पार्टीले स्थापना गर्नु नै चुनाव जित्ने आधार हुन् ।